Nezvedu - Baiyiju Smart Home Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
Kugutsikana kweVatengi Kunenge kuri Kudana Kwedu Kukuru.
Takatanga nefekitori diki yakaburitsa zvishongedzo zve capsule masaja cheya makore gumi nemaviri apfuura, ipapo yedu yakazara-mutsara chirimwa chemacapsule masaja cheya chakamiswa muna2012 uye zvishoma nezvishoma chakazove chikuru uye chakakura chinotengesa mumusika wepasi rese munzvimbo ino.
Makore matatu apfuura, isu takashanda R & D nzvimbo uye tinokwanisa kuburitsa electromotor uye otomatiki system tiri pachedu, zvichibva pane izvi, isu takagadzira magetsi anodzoreka mubhedha hwaro uye inogadziriswa tafura yekugadzira mitsara, zvakadaro, takavaka ndangariro furo chirimwa kuti tikwanise gadzira akaenzana metiresi uye topper neyedu, kupedzisa yedu yepamusoro-yekupedzisira dhizaini yekushandisa ine yepamwedzi chinzvimbo chinopfuura 30,000pcs yematiresi, anopfuura 3,2000pcs eanogadziriswa bed base, uye anopfuura 15,000pcs edhesiki rinogadziriswa.
Chirimwa chedu chitsva chiri kuvakwa adn ichatanga kushanda muzhizha rinotevera uye uye maindasitiri paki anotora anopfuura 260,000 centiare.
Beajom ndiyo yedu ichangovhurwa yekutengesa yepasirese nzvimbo yakakosha mukuchenjera imba yekuchengetera, ndeyechokwadi isu takagadzirira kupa zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro kune vatengi vepasirese, basa redu rekufunga uye yakagadziriswa mitsara yekugadzira inogutsa chero yakatarwa zvinodiwa.
Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemaeuropean nemaAmerican zviyero, zvine zvitupa zvinodikanwa sekudikanwa kwemusika.
Beajom akangwara® sanganisa pfungwa ye ergomotion dhizaini uye yakagwinya & yepamusoro-inoshanda yekugara pamba, kuyedza kuseta yekutanga chikuva one-yekumira mhinduro, inosanganisira inogadziriswa yemubhedha hwaro, inowirirana metiresi, inoshanda piro uye kukwirira chinogadziriswa chakamira tafura, smart rutsigiro furemu etc. Inopa yedu vatengi chiitiko chakanakisa chisati chamboitika.
Brand nyowani musangano muVientnam -design & yekugadzira mapurojekiti.
Yakazara-mitsara chirimwa chemubhedha unogadzirisika muvietnam iri kuvakwa uye ichatanga kushanda mugore rinotevera.
Furo chirimwa chemetiresi muTaiwan china inowanikwa mune zvigadzirwa zvigadzirwa.
Wedu wemugovani ane yakazara-mutsara chirimwa chiri muTaiwan china yakakwenenzverwa pamwe neyegore yekugadzira inokwana mazana mana emakumi mana emakumi mapcs anomanikidza metiresi uye topper. Simba rakakura rakadai rinochengetedza vedu vanogovera mamwe maratidziro echirongwa uye nzira dzekudzivirira mutero.
Kugutsikana kwevatengi ndiyo chiyero uye chinangwa chedu chekambani mhando yehunyanzvi.
Kuve wakadzika midzi mukuchenjera fenicha mukugadzira kwemakore gumi, yedu oem mutsetse urikumhanya nepamusoro kunyatsoshanda uye hwepamusoro kudzora, inopa dzinodhura-dzinogadzirisa mhinduro ne-pa-timedelivery.
Tiri kutsvaga vanobatana navo muamerica / austrilia / europe / kuchamhembe-kumabvazuva kweasia / mediterranean mediterranean. Gamuchira fekitori-kuongorora uye kubvunza.
ZVIROTO ZVAKO ZVINOSVIKA KUUPENYU
Hupenyu hwakangwara smart kurarama. Iyo yedu Beajom Solgan uye chinangwa.
Isu tine tarisiro yekupa mhinduro yakasanganiswa yemhando yepamusoro-magumo mararamiro, kupa yako yepamusha hupenyu hwoumbozha uye kugadzikana pasi pehutano uye hunogara.